Waa Maxay Xogta Dhulka iyo Muxuu Maxay Tahay?
Waxay aasaasaysaa Shirkadaha Offshore, LLCs, Trusts, iyo Xisaabaadka Baananka · Laga soo bilaabo 1906
Jawaabaha dhabta ah ee Xirfadaha Takhasuska ah
Weydii su'aalo ku saabsan bangiga baddan, dhismaha shirkada, ilaalinta hantida iyo mawduucyada la xiriira.
Wac hadda 24 Hrs./Day
Haddii lataliyayaashu mashquul yihiin, fadlan mar kale wac.
Xisaabta Bangiga Badda: Waa maxay? Maxaa Sababay Mid?
Waxa ugu horeeya ee lagu ogaanayo marka la tixgelinayo bangiga badda waa in ay aad ugu egtahay banki dariiqa. Waxaad ka arki kartaa koontadaada khadka tooska ah. Waad gudbin kartaa xawaaladaha bangiga bangiga gudahooda ama ka baxa akoonkaaga. Qaar badan oo ka mid ah bangiyada ku teedsan waxay leeyihiin kaararka deynta ee la xiriira akoonka. Intaa waxaa u dheer, shirkadaha adeegga ka baxsan waxay bixiyaan kaararka deynta dibedda ee dibedda looga bixiyo oo aad kula xiriiri karto koontadaada dibedda.
Sidaad ogtahay, koontada maxaliga ahi kama koobna qaybo yar oo waraaqo lacag ah oo lagu duubay god cubby ah oo magacaagu ku yaal. Koontadaada bangiga ayaa ah macluumaadka kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka bangiga ee lagu keydiyo server-yada adduunka.
Haddii aad safar ugu safarto wadan kale fasax, wali waad awoodi doontaa inaad gasho akaawnkaaga, kala baxdo lacagaha, iwm. Sidoo kale, koontadaada bangiga ee dibedda waxay ka kooban tahay koodbuyuutar kumbuyuutar; Waxay u badan tahay in lagu taageero isla shabakadda kumbuyuutarrada adduunka ee saxda ah sida bangiga deriskaaga ee saaxiibka la ah.
Markaa, macno malahan inaad hoos udhacdo geeska ama dhinaca kale ee meeraha. Si kastaba ha noqotee, lacagtaadu waxay ku jirtaa isla goob: shabakad kumbuyuutar oo caalami ah.
Nabdoonaanta Badbaadinta Bangiga
Marka laga hadlayo amniga bangiga, maskaxda ku hay in ay jiraan heerar maaliyadeed oo caalami ah oo ay tahay in bangiyada ay la kulmaan. Taasi waa, ka hor intaysan bangigu aqbalin lacag-haweyaasha debedda waa inay ka gudbaan tijaabooyinka walaaca dhaqaale qaarkood. Tusaale ahaan, kahor bangiga ku yaal Belize, Nevis, Cook Islands, Switzerland ama jasiiradaha Cayman-ka ma gudbin karaan xawaaladaha taleefanka doollarka Mareykanka, guud ahaan waxay u baahan tahay inay hesho bangiga wariye Mareykan ah. Helitaanka xiriir bangi oo iskuxiran ayaa leh shuruudo qaarkood. Tusaale ahaan, waa in ay u caddeysaa hay'adda Mareykanka in saamiyadeeda dhaqaale ay u hoggaansan tahay heerarka caalamiga ah ee adag. Intaa waxaa dheer, waa in ay si isdaba joog ah uga gudubtaa tijaabooyinkaan si loo sii wado xiriirka.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira qawaaniin dowladeed oo adag oo ka mid ah sharciyadan. Hal shuruudo adag oo dhakhso leh ayaa ah in bangiyada ay tahay inay ilaashadaan keyd wax ku ool ah si ay u hubiyaan amniga keydka. Intaas waxaa sii dheer, sharciyeyashahu waxay si joogto ah u baaraan bangiyada. Tani waxay gacan ka geysaneysaa sidii loo xaqiijin lahaa in bangiyada ay ku sii socdaan una hoggaansanaanta sumcadda xarumahaas caanka ah ee dhaqaalaha. Waxaa jira xayiraad ku saabsan tirada, tirada iyo amniga looga baahan yahay amaahda bangiga iyo maalgashiga. Waxaa jira baahiyo warbixineed saddex-biloodle ah. Intaas waxaa sii dheer, mas'uuliyiinta baanka waa in ay ka gudbaan baaritaannada aasaasiga ah ee degdega ah ka hor inta aysan la yeelan hoggaan hay'ad.
Heerarka & Xeerarka
Waxaa jira qaabdhismeed sharciyeed caalami ah oo loogu talo galay bangiyada. Kuwani waa heerar ay waajib ku tahay in bangiyada adduunka oo dhan ay raacaan si lacagaha loogu diro dibedda. Tan waxaa ku jira Basel III. Basel III waa heerar faahfaahsan oo heerar leh. Gudiga Basel ee Kormeerka Bangiga ayaa hormariyey heerarkan warshadaha. Ujeeddadiisu waa in la xoojiyo oo la mideeyo qaanuunka, kormeerka iyo maareynta khatarta ee waaxda baanka adduunka oo dhan. Ujeeddada cabbirkani waa in la sameeyo waxyaabaha soo socda;
Hagaajinta kartida warshadaha bangiyada ee ka soo horjeeda dharbaaxada ka timaadda dhibaatooyinka dhaqaale iyo dhaqaale, iyadoon loo eegin ilaha
Hagaajinta maamulka khatarta, hawlaha iyo kormeerka
Xoojinta bangiyada 'daahfurnaanta iyo bandhigyada
Waxaa jira heerar caalami ah oo ku saabsan Qiimaynta Caymiska Liquidity Coure iyo aaladda la socoshada halista oo ay tahay in bangiyada ay lahaadaan. Waxay fulinaysaa tan iyadoo hubineysa in hay'ad banki ay leedahay tiro ku filan oo ah hanti aan dareere tayo sare leh (HQLA). Kuwaani waa hanti uu bankigu si dhib yar oo si dhakhso leh ugu beddelan karo lacag caddaan ah. Hay'aduhu markaa waxay u jeesan karaan suuqyada qaaska ah si ay ula kulmaan baahiyahooda dareeraha ah ee Xilliga cimilada maalinlaha ah ee 30. Waxaa jira shuruudaha sahanka maalgelinta ee Net Stable Ratio. Heerarkan waxay u baahan yihiin baananka inay hayaan kayd habeyn maalgalin oo muddo gaaban iyo mid dheerba.
Dhismaha Banking waa mid caadi ah
Bangiga bangiga waa mid aad u badan. Waxaa la soo wariyay in ka badan hal milyan oo ruux oo Maraykan ah xisaabaadka dibadda. Bangiga dibedda ma ahan oo keliya ugu sareeya 1%. Bangi ka baxsan xeebaha ayaa loo heli karaa qof kasta iyo qof kasta oo raba inuu ka faa'iideysto faa'iidooyinka kala duwan. Bangiyo badan oo ajnabi ah ayaa bixiya dulsaar hooseeya. Sidaa darteed, waxay u sameeyaan ikhtiyaar macquul ah qof kasta oo raba inuu sameeyo koonto meel ka baxsan.
Waxaa intaa dheer, faa'iidooyinka leh ee lahaanshaha akoonka bangiga uga gudub fursadaha maalgashi ee kale oo aad qarisaa hantidaada. Faa'iidooyinkaasi waxay saameeyaan qofka caadiga ah waxayna si weyn u wanaajin karaan khibradahaaga maalmeed ee bangiga. Marka laga hadlayo amniga, helitaanka, fududeynta, iyo nabadda maskaxda, waxay umuuqataa in bangiyo shisheeye ay yihiin xalka ugufiican. Waa maalmo loo fekero in baananka shisheeyuhu yihiin qaar fog fog, oo ah qorshe khiyaanayn cashuureed oo laga qariyo dawladdaada hoose. Isku soo wada duuboo, waa sharci, akhlaaq iyo anshax marka si sax ah loo qabto. Intaas waxaa sii dheer, waa ikhtiyaar dhab ah, wax ku ool ah, oo waarta oo ay heli karaan dhammaan kuwa doonaya inay ka faa'iideystaan.
Maxaa loo Baro Inbadan?
Dad badan oo Mareykan ah ayaan ka warqabin waxa ay yihiin bankiyooyinka shisheeye run ahaantii. Laakiin, hoo, hadda waa waqtigii la bilaabi lahaa barashada runta runta ku saabsan. Bangiga dibadu waa adeegsiga nidaamka bangiyada ee ummad ka duwan ta aad ku nooshahay; sida ugu wanaagsan ee awooda, xukun xasiloon. Waxaa jira faa iidooyin maaliyadeed iyo sharci oo badan xagga bangi-dhaafka. Tani waxay u horseedi kartaa dhaqaale xumo doldrums ah. Waxay u dhici kartaa nidaam kaydka federaalka oo liita oo ku xidhan dawlad deyn weyn ku leh, sida Maraykanka. Haddii kale, waxay noqon kartaa, sida guuldaradii Washington Mutual, bangiyada waaweyn ee sida weyn loogu adeego baaritaanka imtixaanka walwalka.
Markaa, waxay umuuqataa inay lagama maarmaan tahay in la bilaabo baadhista bangiyo xeebeed inay tahay ikhtiyaar xalaal ah. Nidaamyada bangiyada Mareykanka iyo kuwo badan oo yurubiyanka ah oo la isku raacay, sida ugu wanaagsan, waxaad sidoo kale u baahan kartaa inaad eegto sababahan aan hoos kaga wada hadli doonno.
Banki ka baxsan badaha wuxuu bixiyaa kala-duwanaanta lacagta kaydkaaga. Tani waxay aad ugu anfacaysaa hagaajinta nabadgelyo, xasilooni muddo-dheer maalgashi oo xasiloon. Bangiyada guryaha oo aad u yar ayaa bixiya fursado lagu helo lacagaha kala duwan. Haysashada hantida dibedda ee lacagaha kala duwan waxay u oggolaaneysaa mid inuu ka faa'iideysto faa'iidooyinka jumps ee isbeddelada lacagaha. Kadib masiibadii 9 / 11, dad badani waxay fureen akoonno bangiyada Kanada waxayna u beddeleen doollarka Mareykanka doollarka Kanada. Kuwa badan ayaa sameeyay macaash wanaagsan oo ah 30% sida doolarka Mareykanka uu u xoojiyay midka Kanadana wuu xoogeystay. Marka, haysashada lacagaha kala duwan waxay badin kartaa maalgashiga, waxay ku siin kartaa soo celin sareysa xaaladaha suuqa qaarkood iyo khataraha hoose.
Suuqyada Caalamiga ah
Waxay u saamaxdaa dakhliga kala duwan ee dakhliga. Sidoo kale waa muhiim in la tixgeliyo in inta Mareykanka uu ku jiray hoos u dhac ku yimid 2008, suuqii Aasiya wuu kobcayay. Adoo xaddidaya meheraddaada gudaha ayaa xayiraya. Marka, waxaad ubaahantahay inaad kasbato faa iidooyinka dhaqaalaha sifiican usocda halka dhaqaalahaaga gudaha uusan aheyn. Xaqiiqdii, waxaad tixgelin kartaa sameynta wax ka badan hal akoon oo shisheeye. Sidaas oo kale, waad iska hubin kartaa naftaada inaad ka faaiideysaneyso shuruucda bangiyada shisheeye ee wanaagsan. Tusaale ahaan Switzerland, bangiyada sidoo kale waa shirkadaha maaraynta maalgashiga. Bangiga Switzerland ayaa la yimid qaar ka mid ah maareeyayaasha lacagta adduunka ugu sareeya. Marka, qorsheeyaha maaliyadeed ee hay'addu wuxuu soo jeedin karaa faylalka ay ku yaalliin isku darka weyn ee koritaanka iyo amniga. Mareykanka wuxuu xadidayaa tirada ganacsiyada uu ganacsade maalinle uga qeyb geli karo. Ka ganacsiga badeecadaha ka baxsan badda waxay kareysaa daboolka.
Qiimaha Dheeraadka ah
Bangiyada Mareykanka sida caadiga ah waxay bixiyaan dulsaar aad u hooseeya oo ku saabsan deebaajiga. Tusaale ahaan, sicirka suuqa ee hadda, haddii aad dhigatid $ 1,000 USD bisha Janaayo, waxaad sameyn doontaa kaliya $ 10 dulsaarka sanadka. Qaarkood waxay dareemi karaan qanacsanaan, ama xitaa ku farxaan, inay lacag ku kaydiyaan keydkooda. Si kastaba ha noqotee, marka aad taas barbar dhigto qaar ka mid ah bangiyada caalamiga ah, waxaad ka heli kartaa xoogaa dulsaar aad u sarreeya oo deyn ah oo dhigaalkaaga ah ee ka baxsan badaha. Waxaan ka hadleynaa xiisaha ku filan si aan kaaga dhigno inaad sameysato koonto ku saleysan kaalmadan oo keliya. Meelaha sida Australia, Switzerland, Netherlands, iyo Faransiiska laga yaabee ineey bixiyaan oo kaliya dulsaarka weyn ee debaajigaaga, laakiin sidoo kale waxaa liiska loogu yaqanaa qaar kamid ah bangiyada ugu wanaagsan adduunka oo dhan.
Dhaqso u dhaqaaq Lacagta
Iyada oo ay la socdaan kala-duwanaanta hantidaada, xitaa xitaa koontada qulqulatada ee yaryar waxay kuu oggolaaneysaa inaad si degdeg ah u socoto Kuwa akoonnada ku leh meel ka baxsan waxay leeyihiin dabacsanaan ay ku dhaqaaqaan dhaqaalahooda, haddii loo baahdo. Tusaale ahaan, waxaad ku sugnaan kartaa xaalad ay hantida lagama maarmaanka u tahay dacwadaha. Intaas waxaa sii dheer, waxaad lahaan kartaa macaamil ganacsi oo joogto ah oo ku saabsan heshiisyada ganacsiga caalamiga ah. Labadan aasaaska aasaasiga ahi waa kuwo iyagu iskood u qiimeeya.
Dhinacyadaan, waxaan sidoo kale ognahay in bangiyada gudaha ay inta badan gacanta ku hayaan lacago aad u kooban oo loogu talagalay ka bixida lacagaha aad u badan. Tani waxay adkaynaysaa in si dhaqso leh loo helo dhammaan lacagahaaga. Caqabada ayaa ah in halkaan ay jiraan xaalado badan oo xadidan oo noocan ah ay u dhinmi karto marka laga hadlayo ilaalinta hantida. Maxay tani muhiim u tahay? Waa tan sababta. Maxaa dhacaya haddii aadan dhaqso ula bixi karin lacagahaaga? Taasi waa, waxaad yeelan kartaa qareen ku jira khadka dambe ee doonaya inuu xayiro koontadaada ilaa uu bangigu ku wareejinayo.
Markaa, inaad koonto ku leedahay meel dibedda ah waxay isku xidhaa gacmaha qofka kaa soo hor jeeda. Lacagtaada si dhaqso leh ayaad u dhaqaaqi kartaa oo / ama waxaad lahaan kartaa tallaabo amane ah oo ammaan-gelineed ee xeebaha ka tirsan oo kaa ilaaliya.
Waxaa laga yaabaa in khasaare badan oo caadi ah ee bangiyada badda ka jirta ay qarinayaan hantida canshuurta. Dhab ahaan, tani waa dhif inay run tahay, maaddaama bangiyada daadka ah ay caadi ahaan caqligal u yihiin ujeedooyinka canshuurta. Taas waxaa la yiraahdaa, waxaa jira siyaabo dhowr ah oo loo ilaaliyo asturnaanta xaddidan markaad isticmaasho xisaab furan. Mareykanka kasta wuu guurayaa $ 10,000 Doolar ama ka badan, waqti kasta, waa inay soo sheegto. Si kastaba ha noqotee, waa suurtogal in la xisaabiyo wax ka hooseeya $ 10,000 USD iyada oo aan la soo sheegin. Waxaad ubaahantahay, si kastaba ha noqotee, waxaad ubaahantahay inaad soo sheegto hadii aad tahay mid saxeex ah koontada ajnabiga. Si kastaba ha noqotee, waxaan si weyn kuugula talineynaa inaad la hadasho la-taliyaha canshuurtaada.
Badbaado Baanka waa Caalami
Khibrad bangiyeed oo amaan ah. Nidaamka kaydka federaalka ee taageeraya bangiyada Mareykanka waxaa, dhanka kale, taageeraya dalka ugu deynta badan ee meerayaasha. Intaa waxaa dheer, daabacaadaha maaliyadeed ee sareeya ayaa soo saaray liisaska bangiyada ugu ammaansan adduunka; midkoodna ma ahaa bangiyada qaran ee Mareykanka. Gabi ahaanba midna. Qaado Majaladda Caalamiga ah ee Maaliyadda, tusaale ahaan, Waxay sii daayaan liistada bangiyada 50 ugu ammaansan sanad kasta. Arrinta naxdinta leh ayaa ah ma xusid bangi kasta oo weyn oo Mareykan ah. Marka qoraalkan la joogo, Bangiyada kaliya ee Mareykanka ee ku jira liiska “ugu ammaansan” waa saddex bangiyo yaryar oo wax lagu beero, waxay ku qoran yihiin lambarada 30, 45 iyo 50.
Marka loo eego Global Fiance, waa kuwan wadamada leh bangiyada ugu ammaansan:
Wadamada kor ku xusan, Switzerland iyo Luxembourg oo keliya ayaa furaya xisaab la'aan iyagoon u baahnayn inay dalka u safraan Kaydinta ugu yar waa mid la taaban karo. Baananka ayaa ugu dambeyntii kuugu imaan doona inuu shakhsi kugu soo booqdo.
Caalami ahaan, si kastaba ha noqotee, way fududahay in la helo bangiyo dalal deyn hooseeya oo aan ku khamaarin (oo aan) ku qamaarin lacagtaada. Sidaas awgeed, waxay awoodaan inay gacanta ugu sii dhigaan lacag ka badan kuwa ka laabashadaada. Markaad u dhigto xagga maalgashiga, xaggee baad rabtaa inaad dhigato lacagtaada meel dhigga? Shirkad lacag ku dabaalanaya? Ama mid deyn ku leh deynta? Wadamada sida Switzerland iyo Luxembourg waxay leeyihiin xeerar banki dhexe oo adag. Waxay ku fuliyaan "jeegag iyo dheellitir" dhammaan waxqabadka xisaabinta bangiga. Bangiyado kale oo badan oo xeebaha ka baxsan iyo dalal kaleba waxay leeyihiin nidaam isku mid ah. Nidaamyadan waxay gacan ka geystaan ​​hubinta dadka raadinaya inay banka ka diraan waxay ku sameyn karaan si badbaado iyo cod leh.
Intaa waxaa sii dheer, khubaro badan oo ilaalinaysa hantida ayaa leh, markii aad badda aado bannaanka uma liidid dacwadaha maxalliga ah. Taasi waa, haddii aad ku xirto tiro aad u badan hantidaada koontada dibedda ah way ku adag tahay qofka kaa soo hor jeeda inuu qabsado. Tan waxaa laga yaabaa inaysan dan u aheyn qof walba; laakiin maskaxda ku hay inay ku adag tahay qof inuu xisaabiye xisaabtaada ku xiro haddii ay fadhiyaan bangiyo shisheeye. Amniga muddada dheer, khubaradu waxay ku talinayaan inaad akoonkaaga ku hayso shirkad ka socota badda iyo / ama aaminaadda. Hantaynta ku haynta aaladahaani ma bixiso oo keliya asturnaanta. Waxay kaloo bixin karaan ilaalin sharci oo wax ku ool ah haddii amar maxkamadeed dalbado dib u celinta lacagaha.
Dejinta Koontada Dibadda
Tani waxay u badan tahay inay u noqon la yaab. Way ku sii adkaaneysaa dadka Mareykanka inay sameystaan ​​akoonno meel ka baxsan ah. Macluumaadkani waa mid aad u muhiim ah. Marka, waa lagama maarmaan in la weydiiyo xirfadle khibrad leh si uu kuugu helo bangiga kuugu fiican adiga. Taasi waa adeeg ay hay'addeenu bixiso. Waan ognahay bangiyada ay aqbali doonaan macaamiisha shisheeye. Waxaan daneyneynaa baananka aan dareemeyno inay yihiin kuwa ugu xoogan uguna amniga badan oo bixiya adeegyada ugu soo jiidashada badan.
Waxyaabaha laga yaabo in ay eegaan:
Jiritaanka macaamiisha Mareykanka. Bangiyada oo dhami wali ma aqbalaan macaamiisha Mareykanka, Kanada iyo Yurub.
Awoodda furitaanka akoonka looga fogeeyo. Waxa jira bangiyo dibedda ka jira oo leh fursado ay macaamiishoodu ugu furan karaan akoonno internetka ama taleefanka ah. Caadi ahaan, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad keento dukumiinti aqoonsi-sharciyeed looga baahan yahay macmiilkaaga. Bangiyada kale waxay kaa codsanayaan inaad toos u booqato bangigooda si aad u furato xisaab. Taasi waxay tiri, qaar ka mid ah bangiyadaas waxay leeyihiin laamo gudaha ah. Sidaa darteed, qaar ayaa kuu oggolaanaya inaad sameysato akoonno dibedda ah adigoo maraya laanta maxalliga ah. Dhibaatada ayaa ah in maxkamadaha Mareykanka ay awood u leeyihiin laamaha maxalliga ah. Marka waxaa muhiim ah in la isticmaalo bangi aan laheyn goobo Mareykanka u dhigma.
Waxyaabaha ugu yar. Baananka badankood waxay ubaahan yahiin lacag dhigis ugu yar oo ay ku furaan koonto (taasi waxay ku socotaa gudaha iyo dibada). Marka waxaad ubaahantahay inaad raadsato bangi ay ugu yar tahay sabab adiga kugu kalifta.
Bangiyada ay leeyihiin macaamiil gudaha ah iyo sidoo kale macaamiil shisheeye. Waxaad ku nasan kartaa in bangiga u adeegta dadka maxalliga ah in si wanaagsan loo kormeeri doono. Bangi ay leeyihiin macaamiil shisheeye oo kali ah, waxaa badanaa loo yaqaan bangiga "Class B". Bangiyadan ayaa laga yaabaa inay si fudud uga taxadaraan kormeerayaasha. Bangiyada “Class A” waxay caadiyan aqbali karaan maal-galiyaasha gudaha iyo shisheeyaha labadaba.
Bangiyo badan oo ajnabi ah ayaa leh shuruucda asturnaanta oo adag mana bixiyaan macluumaadka xisaabta. Soo sheegista cashuurtu, si kastaba ha ahaatee, waa arin kale. Hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga waxay mas'uul ka yihiin xereynta foomamka qaarkood ee loogu talagalay dadka deggan Mareykanka iyo muwaadiniinta. Taasi waxay ka caawineysaa iyaga inay u hoggaansamaan shuruucda canshuuraha ee Mareykanka. Masuuliyada sidoo kale waxaa saaran qofka leh akoontada si uu si sax ah u soo sheego. Markaad sameyneyso koonto dibadeed waxaad sidoo kale dooneysaa inaad maskaxda ku hayso sharciyada canshuurta aasaasiga ah. Waxaa muhiim ah in la xuso, iyadoo la raacayo, tan waxaa loola jeedaa inay noqoto macluumaad waxtar leh oo aan ahayn talooyinka canshuurta. Waa la beddelaa. Marka, marka hore talo ka raadi xisaabiyaha liisan haysta. Taas ayaa la yiri, waxaa lagu talinayaa in Mareykanku maskaxda ku hayo waxyaabaha soo socda.
Waa inaad soo sheegtaa dhammaan dakhliga adduunka. Tani waxay khuseysaa xataa haddii aad bixiso canshuur shisheeye dakhligaaga. Ka dhigista lacag ka badan oo kaliya bixinta cashuurta markaad dib u soo celiso waxay joogsatay 1964. Shirkadaha waawayn ee leh saldhig saamiyeed ballaaran ayaa ka qaadi kara tan; laakiin ma ahan shakhsiyad ama shakhsi dhowaan haya.
Waa inaad soo sheegtaa koontada bangiga shisheeye ee ka sarreysa $ 10,000 USD. Kani waa mid lagu kabo warbixinta dakhligaaga. Haddii aad leedahay koonto bangi oo ka baxsan toban kun oo doolar, waa inaad fayl garaacdaa FBAR.
Dakhliga dulsaarka Haddii aad leedahay wax dulsaar ah (dakhli, khasaaro, kasbasho, jar-jaryo, kasbasho, iyo qaybinta) hanti kasta oo ajnabi ah oo ka sarraysa $ 50,000 USD maalinta ugu dambeysa ee canshuurta ama $ 75,000 USD wakhti kasta sanadka, waa inaad Fadlan foomka 8928.
Ciqaabta iyo dulsaar bixinta si aan sax ahayn u soo sheegin canshuurahaaga. Ma jiro sharci xaddidan oo ku saabsan ka baxsiga cashuurta. Ciqaabtu waxay u dhexayn kartaa $ 10,000 illaa boqolaal kun oo doollar. Baxsashada cashuurta, warinta beenta ah, iyo soo gudbin la'aanta ayaa laga yaabaa inay qaadaan ganaaxyo adag. Marka iska hubi inaad u hogaansanto dhammaan sharciyada canshuuraha.
Go'aanka Saxda ah
Marka laga reebo dhammaanba, waxaad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso in aan bangiga midnaba xaq u lahayn qof walba. Inkastoo dadka qaarkood u baahan yihiin bangiyada waawayn ee awoodda leh oo si sahal ah u bixin kara lacagaha, qaar kale ayaa laga yaabaa inay raadsadaan faa'iidooyinka "ilaalinta hantida".
Si ka soo horjeedda aaminsanaanta caanka ah, bangi-dibadeedka ma aha mid ka baqaya cashuuraha ama qarinta hantidaada. Waxay inbadan ka hadlaysaa meheraddaada iyo ka helitaanka hantida hantidooda kibirka murugada. Taasi waa, dad badani waxay si fudud u aasaasaan akoonno meel ka baxsan si ay uga faa'iideystaan ​​shuruucda caalamiga ah ee wanaagsan.
Badbaadada Dhulka ee Badbaadinta
Markii wakhtigu sii socday, runtiina, waxay umuuqataa su’aasha inay ka yar tahay “Ma baananka shisheeyuhu aniga baa?” Iyo in ka sii badan “Baananka gudaha ayaa aniga igu habboon? Tani waa natiijada tooska ah ee nidaamka bangiyada ruxmaya. Waa nidaam ay taageerayaan dowlad deyn lagu leeyahay; dowlad lagu gubo lacagta dadka.
Dhanka kale, kaydka federaalka ayaa ku jira jahwareer. Haddii aad si kale u aragto, isbarbar dhig wakaalado la mid ah oo ka jira waddammada aan deynta qotodheer ku lahayn. Xaqiiqdi su’aashu kama taagna inay bangi bannaanka tahay mid badbaado leh. Su’aasha ay tahay in aan isweydiinno waa tan. Kee baan ah oo aamin ah oo aan u isticmaalno faa'iidadeena shakhsiyeed, sharci, ganacsi, iyo dhaqaale?
Bangiga bangiga waxay u oggolaaneysaa kordhinta asturnaanta dhaqaalaha. Shaqsiyaad badan iyo shirkado badan oo adduunka ah ayaa ka faa'iideysanaya dheefaha qarsoodiga ah. Degganeyaasha Mareykanka waxay ku raaxeysan karaan abaalmarino lacageed oo la mid ah tan dadkaan iyo ganacsiyada ay ku helaan bangi ka baxsan.
Ka ilaalinta lacagtaada furiinka, dacwadaha iyo dagaalada sharci waa sabab kale. Waxaad ku furi kartaa akoonnada bangi ee ku yaal magaca shirkadaha dibadaha ku yaal si aad u siiso asturnaanta iyo amniga ugu badan. Xisaabaadka bangiyada dibada waxaa kaliya loogu talagalay maalqabeenada. Waxaa jira kor u kac ku yimid tirada dadka Mareykanka ee lacagtooda geliya akoonnada maaliyadeed ee gaarka loo leeyahay. Ujeedada qoraalkani waa in la bixiyo faham iyo macluumaad ku saabsan mowduuca.
Qarsoodiga Koontada Bangiga Dhexe
Inta badan awoodaha akoonada bangi ee xeebaha waxay leeyihiin qawaaniin adag iyo xeerar sir qarin. Kuwaani waxay diyaar u yihiin in laga caawiyo hubinta in aqoonsiyada maal-gashadeyaasha iyo maalgashadayaasha iyo sidoo kale macaamilyada la xiriira ay yihiin qarsoodi. Taasi waa, baaritaanka caadiga ah ama isha isha haysa ma awoodi doono inay arrimahaaga dhaqaale gasho. In kasta oo sirtu ay u dhowdahay halyeeyo, suurogal ma aha in la dammaanad qaado sirta iyo asturnaanta. Dhammaan hay'adaha maaliyadeed ee adduunka oo dhan waxay leeyihiin waajibaad sharci oo muuqda. Sidaas oo ay tahay, waa inay soo sheegaan ayna u hoggaansamaan baaritaannada ku aaddan falalka dambiyada culus ee looga shakiyo. Tan, dabcan, waxaa ka mid ah argaggixisannimada, lacagta la dhaqay, ama miraha ganacsiga sharci darrada ah.
Si kastaba ha noqotee, inta badan kiisaska badankood ma jiraan eedeymo dambiile oo khasab ah. Markaa, macluumaadka kaydiyuhu wuxuu ilaaliyaa hab masayr ah. Kuwani akoonka bangiga xukumada waxaa loo habeeyay inay siiso waxa ugu badan ee xafidaada, loona adeego in si cadaalad ah loo ilaaliyo loona ilaaliyo macluumaadka keydka. Qarsoodigan heerka sare ah ayaa gaar ahaan mudan in la xuso maadaama ay la xiriirto ka ilaalinta hantida maxkamadaha. Tusaale ahaan, arrimaha madaniga ah sida furriinka ama guryaha la isku haysto waa dagaallo maalinle ah oo ka dhaca maxkamadaha.
Maaha danaha bangiga inuu kashifo macluumaad qarsoodi ah ama lacag ku uruurinta. Sidaas darteed, waxay caado u leeyihiin inay kaliya ka gaabsadaan oo ay la socdaan tijaabooyin adag, oo wakaaladaha codsanaya ay la kulmaan. Wax kasta oo qarsoodi ah ama wax jabsada ee sirta ku jira waxay u adeegi doontaa inay jabiyo kalsoonida dadka kale ee akoonka ku jira. Sidaasoo kale, waxay u taagnaan lahaayeen inay lumiyo heshiis weyn oo ka dhexeeya ganacsiga bangiyada.
Xitaa heerar qoto dheer oo adag oo qarsoon iyo qarsoodi ayaa diyaar ah oo diyaar ah. Mid ayaa ku wanaajin kara asturnaanta iyada oo loo marayo gawaarida heysata hantida sida Shirkadaha Ganacsiga Caalamiga ah (IBCs) ama Kalsoonooyinka Dibadda. Qalabkani wuxuu bixiyaa buuro ilaalin ah marka la barbar dhigo “furitaanka xisaab bangi.”
The goolka qof kasta oo raadinaya inuu furo mid ama in ka badan akoonnada bangi ee dibedda waa inay ahaadaan. Si loo dheelitiro dheelitirka ku habboon ee u dhexeeya ilaalinta hantida, magangalyada, amniga, iyo marin u helka waxaa muhiim ah in la hago. Hubso inaad heshid la-taliye si aad u hesho xalka kugu habboon adiga.
Macluumaad Dheeraad ah oo Ku Saabsan Bangiga Dibadda
Xeerarka caanka ah ee akoonnada bangi-dibadeed waxaa laga heli karaa meelo kala duwan oo adduunka ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa aad muhiim u ah in la sameeyo shirkad ka socota xeebaha si ay u yeeshaan koontada bangi ee dibedda. Awoodda u fidisa sirta gaarka ah mulkiilayaasha shirkada badaha ma ahan inay la mid tahay awooda bixiyaha koontada bangiga. Mid ayaa kaxayn kara gawaarida Mercedes. Laakiin gaarigaasi ma yeelan doono taayirrada Mercedes. Waxay u badan tahay inay qaadi doonto Goodyear, Firestone, Continental of taayirrada Michelin.
Sidoo kale, waxaad ubaahantahay inaad doorto xukunka awooda qalabka sharciga ah. Markaa waxaad ubaahantahay inaad dooratid xukunka hay'adda maaliyadeed ee ugufiican ee buuxisa baahiyahaaga.
Tusaale ahaan, waxaad ku yeelan kartaa shirkad ku taal jasiiradda Nevis iyo bangi ku taal Switzerland. Sharciga shirkada Nevis wuxuu bixiyaa sirta guud ee lahaanshaha. Switzerland waxay bixisaa iskudhafka ugu adag ee amniga bangiga iyo asturnaanta maaliyadeed. Waa muhiim in la sameeyo isku dhafka saxda ah ee baahiyahaaga gaarka ah.
Ku soo biir Kooxda Dacwada
OffshoreCompany.com waa awooda adduunka ee adeegyada howlaha ka baxsan. Ururka ayaa ku takhasusay arimaha gaarka ah ee dhaqaalaha iyo qorshayaasha ilaalinta hantida ee dhagaystayaasha adduunka oo dhan. Shirkadda waxay joogtay tan iyo 1906. Waxaan ku boorinaynaa macmiil kasta oo mustaqbal leh inuu raadsado caawimaadda macallin adeegyada xeebaha ku kalsoon. Waxaad kula xiriiri kartaa adoo adeegsanaya lambarka taleefanka ama foomka wadatashiga ee ku yaal boggan.
Furitaanka akoon dibadeed waxay bixisaa ikhtiyaar kale oo sharci ah si loo ilaaliyo lacagtaada. Shirkaddan ayaa "joogtay" tan iyo 1906.
Robert Kiyosaki, ganacsade caan ka ah adduunka, bare cilmiga dhaqaalaha ah iyo qoraaga buugga NY Times ayaa sidaas yidhi. “Hadaad rabto inaad meel aado, waxaa ugufiican inaad raadsato qof horey udhacay halkaas.
Sida kor lagu soo sheegay, qiyaastii, 2.7 milyan oo Mareykan ah ayaa lacagtooda ku leh xisaabaadka dibadda. Siyaasiyiinta Mareykanka, maal-gashadayaasha hodanka ah iyo dadka caanka ah ayaa si isku mid ah uga faa'ideysta bangiga badda fursadaha. Lambarkan wuxuu ka reebayaa 7.6 milyan ee Muwaadiniinta Mareykanka ee ku nool iyo bankiyo dibadda, sida ay sheegtay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Sidoo kale, aan lagu darin wadarta guud, waa tirada dadka millatariga Mareykanka ah ee ku nool daafaha adduunka. Macno malahan hadii aad heysato dhalashada Mareykanka ama ku nooshahay qurbaha ku nool. Si kasta oo ay ahaato, dadka intooda badani sharci ahaan way uga faa iidaysan karaan lahaanshaha koonto meel ka baxsan ah.
Musiibada dhaqaale ee ugu dambeysay ee dalka Mareykanka waxay ka dhacday 2008. Muddadan, qaar ka mid ah hay'adaha ugu waaweyn ee baananka ayaa khasaaroobay. Tan waxaa u sabab ah khiyaanooyin khiyaano ah oo lagu sameeyay dadka shaqeeya ee Mareykanka. Waxay dirtay shoog adduunka oo dhan. Balaayiin doolar oo kayd ah iyo howlgab ayaa la waayey. Musiibada ayaa ku dhacday dad badan oo jabtay, oo ay tahay inay wax ka bilowdaan. Kumaa u sheegaya in taasi aysan dib u dhici doonin?
Ka hor intaas, suuqyada saamiyada Mareykanka ayaa ku dhacay 2000. Tan waxaa loo yaqaanay 'dot com xumbo,' sidaad xasuusato. Kadib waxaa jiray maalintaas caanka ah Oktoobar 19, 1987. Waxaan ugu yeern taarikhda "Black Isniinta" waana tii ugu weyneyd ee hal maalin dhaqaale burburin taariikhda Mareykanka. Waxay dhalisay in kabadan 500 bilyan oo doolar suuqii ayey ka baxeen. Kahor taas, masiibada ugu caansan ee caan ah waxay ahayd Musiibada Weyn ee 1929. Tan waxaa lagu daray dib-u-dhacyo badan inta u dhexeysa hadda iyo ka dib taasi oo kicisay dhaqaalihii malaayiin Mareykan ah.
Waxaa intaa dheer, Mareykanka ayaa ah midka ugu dheer dunida oo dhan deynta. Maaddaama dulsaarka cirka isku shareeray ee qaranku leeyahay, ayaa haddana musiiboyin badan oo dhaqaale oo badan oo gudaha Mareykanka ah ay sidoo kale sameeyaan. Tan waxaa ku jira burburka bangiyada… in lacagtaadu ku jiri karto. Ha isku hallayn FDIC inay kuu diidaan. Shirkadda Ceymiska Debaajiga ee Federalka (FDIC) waa shirkad dowlada mareykanka ah oo siisa ceymis dhigaal dhigeyaasha keydka Mareykanka. Dhibta kaliya ee jirta ayaa ah, haa, waxaa taageeraya dadka deynta badan ku leh aduunka.
Samee waxa taajiriinta iyo xog ogaanta ahi sameeyaan
Waxaa si weyn loo ogyahay in kala duwanaanshaha boortafoorti ay tahay wadada saxda ah ee loo maro. Galinta lacagtaada saamileyda, maalgelinta wadajirka ah, maalgashadayaasha hantida iyo hantida maguurtada ah waa dhowr ikhtiyaar u leh maalgashade celceliska Laakiin haddii dhammaan maalgalintaas ay ku sugan yihiin Mareykanka, dhammaantood waa la dumin karaa isla weelka. Haddii ay dhacdo maalgalin kale oo maaliyadeed oo Mareykan ah waxay u burburin kartaa qeyb ka mid ah qiimahooda asalka ah.
Maxaa dhacaya haddii ay jiraan xulashooyin maalgashi oo kale?
Kawaran haddii ay jiraan habab badan oo lagu maalgashado, lagu ilaaliyo laguna badsado faylalkaaga maaliyadeed? Waxaa intaa sii dheer, maxaa dhacaya haddii aad heysatid gunno dheeri ah oo aad ku haysato sirta ugu weyn ee maalgashigaaga?
Taasi waa meesha xisaabaadka bangiga dibadda soo gal.
Si loo caddeeyo sida ay tahay suuqa weyn ee suuqa koonfureed, in ka badan $ 32 trillion dollars ayaa lagu meeleeyay xisaabaadka qulqulka. Maalgashadayaashu waxay dareensanyihiin in Maraykanku aanu ahayn oo "ma tagin" meel ay ku helaan lacagtooda. Xaqiiqdi, illaa iyo inta laga warqabo bangiyada aaminka ah, Mareykanka wuxuu liita liiska liisaska bangiyada ugu amniga badan adduunka.
Sidaan horayba u soo sheegnay, sida ku xusan liiska Maaliyadda Caalamiga ah ee “The World’s 50 Safest Banks 2015,” Mareykanka wuxuu kujiraa #30, #45 iyo #50 liiska liiska bangiyada ugu amniga badan adduunka! Bangiyada yar yar ee wax soo saarka beeraha, AgriBank, CoBank iyo AgFirst ayaa ah bangiyada kaliya ee Mareykanka ee liiskan sameeyay. Bangiyada ay inta badan muwaadiniinta Mareykanka u isticmaalaan dhaqaalaha, Chase, Citi iyo Bank of America ayaan wali ku jirin liiska.
Ka dhigaysa inaad u malaynayso…
Sameynta dulsaar yar lacagtaada marka loo fiiriyo sicir bararka sanadlaha ah wuu ka gartaa. Qaadashada fursadaha halista ah inaad si qarsoodi ah ugu maal gasho suuqa saamiyada ma ahan qaab aad ku gaari karto yoolalkaaga dhaqaale.
Fursadaha ayaa ah inaad si dhab ah u shaqeyso maalin kasta. Waad lahaan kartaa meherad, bixin kartaa biilasha oo aad u dhaqmi kartaa qaab dhaqaale ahaan mas'uuliyadi ku jirto. Lacagta aad uga tagtay oo aad kaydiso (oo aad isku daydo inaad maal gasho naxariista suuqa saamiyada) waa ukuntaada. Taasi waa hawlgabnimadaada, iyo riyadaada nolol wanaagsan.
Waqti kasta, garyaqaanada hunguri weyni waxay xayiraan koontadaada bangiga waxay lacagtaada ka dhigayaan kuwo aan la gaari karin. Arrimo ku saabsan IRS, furriinka, biilasha caafimaadka ee aan la bixin, arrimaha masruufka carruurta ama xukun kasta oo kaa gees ah waxay kuu horseedi kartaa in koontadaada bangiga lagaaga jaro.
Xitaa guursashada iyo furiinka suurta galka ah waxay cadeysay inay dhaliso musiibo maaliyadeed, inbadan oo kamida kama soo kabtaan. Sabab? Sababtoo ah dhammaan hantidaada waxay ku jiri kartaa Mareykanka. Sidaas oo kale, waa kuwo muuqda oo u nugul xukunka iyo wareejinta, oo kaaga taga guriga saboolka ah.
Guurku wuxuu kudhacey shucuur ahaan, haa. Laakiin sidoo kale waxay ku dumisaa dadka dhaqaale ahaan. Hawlgallada furniinka waxay qaadan karaan sannado in la soo gabagabeeyo. Mid ayaa ku gacan seeli kara tobanaan kun ama xitaa malaayiin doolar. Mar dambe, waxay kugu dhaafikartaa qayb yar oo ka mid ah wixii aad dhistay. Inaad dhaqaale ahaan ka warqabto xaqiiqadan ayaa iyaduna sabab kale leh. Waa sabab kale oo loogu qoondeeyo qaar ka mid ah lacagtaada koonto meel ka baxsan qalabka sharciyeed adag. Taas dhexdeeda, waad ka ilaalin kartaa habka waxyeelada leh.
Furitaanka akoon dibadeed ayaa ku siinaya xorriyadda inaad lacagtaada ka dhigto mid khaas ah oo aan u nugul moo mooshinka.
Muuqaal Maaliyadeed oo Fiican
Saxaafadda ayaa badanaa u yeertay akoontiga ka baxsan xeebaha “hoyga badbaadada canshuurta” ama “goobo canshuureed.” Waqtiyadii la soo dhaafay, IRS si weyn uma fiirsaneynin lacagaha lagu maalgashadeyo badda. Sababtoo ah waxaa jiray faa iidooyin badan oo ku aaddan maalgashiga lacagaha badda. IRS hadda waxay adkeysay kuwa raadinaya inay raadsadaan kaalmooyin maaliyadeed - IRS-na waxay dooneysaa qaybteeda.
2009, shirku wuxuu meel mariyey Sharciga Isku-Darka Canshuuraha ee Shisheeyaha (FATCA). Waxay cadeysay, sidii horeyba, in muwaadiniinta Mareykanka ee ku nool dibedda inay u baahan yihiin inay canshuurtooda ku xareystaan ​​IRS. Waxa ku cusub, si kastaba ha noqotee, waxay ahayd in hay'adaha maaliyadeed ee dibedda jooga ay u baahnaayeen inay soo bandhigaan macaamiishooda Mareykanka ee la shaqeeya. Wadanku wuxuu helaa inta badan wararka ku saabsan arintaan waxay ahayd Switzerland. Xisaabta Bangiga Switzerland waxay lahayd, walina waxay leedahay feejignaan aad u weyn. Switzerland waa waddan weyn oo lagu maalgeliyo ama lagu keydiyo lacag. Waxaa caan ku ah badbaadada bangiga iyo dariiqa fursadaha maalgashiga. Xeerarkan ayaa u rogay inay noqdaan ilaah. Taasi waa sababta oo ah waa wax doqonnimo u leh qof inuu ku eedeeyo qof Mareykan ah inuu lunsaday canshuur dhaafid shisheeye. Marka bangiga ay adeegsadaan ay ku qasban yihiin inay soo sheegaan, baadi-goobayaasha cashuurtu aad bay uga yar yihiin arin la soo sheegay. Markaa, waxay u hoggaansamaysaa dadka Mareykanka taas in ka fudud.
Waxaa jira daraasiin dalal kale ah, marka lagu daro Switzerland, si ay u maal gashadaan lacagtaada.
Fadlan ogsoonow in ay si sharci ah u tahay bangiga xisaabaadka badda. Muwaadiniinta Mareykanka waxay u baahan yihiin inay u soo sheegaan faa'iidooyinkooda badda ee IRS. Tani waa lakab sahlan oo dadaalka waajibka kugu ah inaad sameyso inta lagu guda jiro xilliga canshuurta. Laakiin sidoo kale ogsoonow in CPA-yada iyo qareennada fahmaya xeerarka canshuurta bangi ee xeebta ay caawin karaan. Kuwa si fiican u yaqaan sharciyadaan cusub waxaanay kugu raacayaan habka warbixinta fudud.
Ku keydinta lacagtaada oo dhan nidaamka nidaamka bangiyada Mareykanka maalmahan waa qaab waqtigiisu dhaafey, oo aan amaan ahayn oo loo dejiyo maalgashi. Maxaad ugu keydisay keydkaaga nidaamka khiyaanada, musuqmaasuqa, nidaam xumada?
Furitaanka koonto meel ka baxsan ma aha wax adag. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira sharciyo cusub iyo boodhadhyo lagu boodboodo, iyo sidoo kale tirada bankiyo shisheeye kuwaas oo aan aqbalin dhigeyaasha US, Canadian ama Australian. Marka, waxaa si weyn lagula talinayaa in la raadiyo shirkad khibrad u leh soo-gelinta iyo bannaanka bangiyo-ka shisheeye.
Ma xiisaynaysaa inaad wax dheeraad ah ogaato? Hadey haa tahay, waxaan halkaan u joognaa inaan caawinno. Waxaa jira foomka wada tashiga ee ku yaal boggan oo aad ku buuxin karto hadda. Intaas waxaa sii dheer lambarro aad wici karto si aad ula hadasho la taliye khibrad leh. Xor baad u tahay inaad ka faa'ideysato fursadahaas oo aad annaga noo hesho caawimaad.
Ilaa cutubka 2>
CA 91355, Maraykanka of America
Xuduudaha ugu sarreeya
Deeqnimo oo farxad u ah macaamiishayada, si ay u saxdo dokumentiyada saxda ah, u adeegga wakhtiyada ku habboon ee aan ku xakamaynayno, iyo u adeegidda danta ugu fiican ee macaamiisheena qarsoon.
Copyright © 2000-2019 Shirkadda Offshore